डेन्टल एसोसिएसनको अध्यक्षमा डा. प्रेक्षा निर्वाचित – KhabarPurwanchal
डेन्टल एसोसिएसनको अध्यक्षमा डा. प्रेक्षा निर्वाचित
खबर पूर्वाञ्चल, ५ भाद्र २०७८, शनिबार १८:३०
विराटनगर / डेन्टल चिकित्सकहरूको संस्था नेपाल डेन्टल एसोसिएसन मोरङको अध्यक्षमा डा. प्रेक्षा दली निर्वाचित भएकी छिन् । डा. प्रेक्षा गोलाप्रथाद्धारा निर्वाचित भएकी हुन् ।
विराटनगरमा आज सम्पन्न भएको निर्वाचनमा डा. प्रेक्षा र उनकी प्रतिस्पर्धी डा. नुतन नौलाखा समान २४/२४ मत ल्याएकी थिइन् । एसोसिएसनमा ५० जना सदस्य भएपनि ४८ मत खसेको थियो । दुई जना सदस्य उपस्थित भएनन् । डा. प्रेक्षा र डा. नुतनले समान २४/२४ मत पाएपछि अध्यक्ष गोला प्रथाबाट निर्वाचन गर्ने निर्वाचन समितिले निर्णाय भएको थियो । सोही अनुसार डा. प्रेक्षा गोलाप्रथाबाट नेपाल डेन्टल एसोसिएसन मोरङको दुई वर्ष कार्यकालको लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
यसअघि सर्वसम्मतबाट एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयन हुदै आएको थियो । अन्य पदमा सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी र कार्यसमिति चयन भएपनि अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन भएको हो । अहिलेसम्मको इतिहासमा नेपाल डेन्टल एसोसिएसन मोरङमा निर्वाचनको पद्धतिबाट अध्यक्ष निर्वाचन गरेको यो पटकको पहिलो भएको बताइएको छ ।
एसोसिएसनको उपाध्यक्षमा डा. बिवेक सिंह, महासचिबमा डा. मिरा आचार्य, कोषाध्यक्षमा डा. पवन मेहता, सह–सचिबमा डा. विशालराज जोशी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । यस्तै सदस्यहरू डा. प्राचि भगत, डा. निलेशकुमार देव, डा. अमिनकुमार सिंह र डा. आदित्य साह पनि सर्वसम्म रूपमा चयन भएका छन् ।